Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: June 2010
မတရားညှစ်ထားခြင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ 'Death Grip' တဲ့
မတရားဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းလို့ ဘာသာပြန်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားတာဗျာ...အဓိပ္ပါယ်တွေ ပိုလွဲချော်ကုန်မစိုးတာနဲ့ 'ညှစ်' လို့ပဲ သုံးနှုန်းလိုက်တာ.. အဲတာသာ ကြည့်တော့ ဘာသာပြန်တာ အဲ့လောက်ကို တော်တာ...။
ဖောက်သည်ချချင်တာက မတရားညှစ်ထားရင် iPhone မပြောနဲ့ ဘယ်လက်ကိုင်ဖုန်းမှ အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်ကြောင်းပါ။ အေးလေ.. ဟုတ်သားပဲ အညှစ်ခံထားရမှတော့ ဘယ်မှာ အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်မလဲနော်း..မယုံရင် ညှစ်ကြည့်..(တလွဲမထင်နဲ့ ဘေးကလူရဲ့ လည်ပင်းကိုပြောတာ ထမရိုက်ရင် ကံကောင်းမှတ် :P)
Read more (ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုလျှင်)»
Posted by Ko Gyii at 4:48 PM No comments :
Labels: Death Grip , iPhone , မတရားညှစ်ထားခြင်း , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
Posted by Ko Gyii at 11:17 PM No comments :
Labels: cute , ဖျော်ဖြေရေး
Posted by Ko Gyii at 5:51 PM No comments :
ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ ရှိတယ်.. ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ...
အဟဲ..နည်းနည်း ဟဲကြည့်တာ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ ဆူညံသံအကြောင်း ပြောချင်လို့...
ပတ်ဝန်းကျင်က လာတဲ့အသံဗျာ.. ကိုယ့်နဲ့ မပတ်သက်တဲ့ အသံဆို နားကလောတယ်။ ကျယ်လောင်တယ်။ နားငြီးတယ်လို့ ခံစားမိကြတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က လာတဲ့ ဆူညံသံပေါ့။
ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသံဗျာ..နားစည်ထဲ ဝုန်းဒိုင်းကျဲနေပစေ ဆူညံတယ်လို့ မထင်ရဘူး။ ဘာလို့လဲမေးရင်.. ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အသံကိုးဗျ...။
ဒီတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကဆူညံသံကို မကြားချင်ဘူးဗျာ။ ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ နားပိတ်ထားလိုက်ပေ့ါ။ မပိတ်ချင် ပြောင်းပြေးပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အသံပဲ ကြားချင်တယ်ဗျာ။ ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ နားစွင့် ထားလိုက်ပေါ့။
ကိုယ်က ပြောင်းပြေးလို့ မရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရောက်နေတယ်။ ဆူလည်းဆူညံတယ် ဆိုပါစို့။ တီဗွီ၊အောက်စက်မှာ အသံကို ပိတ် MUTE လုပ်ထားသလို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ အသံတွေကို Mute လုပ်ထားချင်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က အသံပေမည့် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အသံကိုတော့ ကြားချင်ပြန်တယ်။ ဥပမာ။ ဘေးအိမ်က ရန်ဖြစ်သံ၊ လမ်းဘေး လ္ဘက်ရည်ဆိုင်က နေ့နေ့ညည ဖွင့်ထားတဲ့ ကက်ဆက်သံတွေ မကြားချင်ဘူး။ ဒါပေသိ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အသံ ဥပမာ အိမ်ရှေ့က ဒါနဆန်များမေတ္တာရပ်ပါတယ် ဆိုရင်တော့ ကြားမှ ဖြစ်မယ်။ ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ အသံတွေကို အရင်ဆုံး တစ်ခါတော့ နားထောင်ရမဗျ။ နားထောင်ပြီးရင် အဲ့ဒီ အသံကို သရုပ်ခွဲမယ်။ ဆူညံသံဆို မြူ့ လုပ်ပစ်ဗျာ။ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အသံဆို အသံထွက်စေဗျာ။ ဟုတ်ပီနော်။ ကျနော်တို့ လက်ရှိ ခေတ်ပေါ်နည်းပညာနဲ့ လက်တွေ့ ဘဝမှာတော့ ဒါမျိုး လုပ်လို့ မရနိုင်သေးပါဘူး။
ဆိုင်ဘာ ဘဝထဲက ဂျီမေးမှာတော့ ဒါ လုပ်လို့ ရနေပီဗျ။ အခုဆွေးနွေးချင်တာက GMAIL ရဲ့ Mute နဲ့ ပတ်သက်တာကိုပါ။
အပေါ်က စာကို သေချာ ဖတ်လာခဲ့ရင် ဆက်ပြောပြတာကို နားရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
Mailing List တစ်ခုခုမှ လာသောမေး (ဥပမာ မေးဂရုစသည် တစ်ခုခုမှ ဖော်ဝပ်မေးများ)
= ပတ်ဝန်းကျင်က လာတဲ့ ဆူညံသံ
ကိုယ့်လိပ်စာဆီ ပို့လာသော တိုက်ရိုက်မေး
= ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အသံ
ကိုယ် မန်ဘာဝင်ထားသော မေးဂရု
= တခြားပြောင်းမပြေးချင်သော ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်
Mailing List တစ်ခုခုမှ လာသောမေးများထဲမှာ တချို့စာတွေက ကိုယ်နဲ့ လုံးဝမဆိုင်ဘူး။ ဒီအကြောင်းအရာ (Thread) ကို ဖတ်လည်း မဖတ်ချင်ဘူး။ မဖတ်ပေမယ့် ဒီမေးတွေ မေးဘောက်စ်ထဲ ဝင်နေမှာ။ မန်ဘာအဖြစ်ကလည်း နှုတ်မထွက်ချင်ဘူးလေ။ ဒါ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေတယ်။ တခြားကို လုံးဝ ပြောင်းမပြေးနိုင်ဘူး။ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာပဲ ကိုယ့်လိပ်စာဆီ ပို့လာသော တိုက်ရိုက်မေးကိုကျတော့ လက်ခံချင်တယ်။ မခံလို့ မဖြစ်ဘူး။ အင်ဖော်မေးရှင်းတွေ အောက်ကုန်မယ်။ ဒါဆို ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ ကိုယ့် ဂျီမေးရဲ့ Mute ကို သုံးရပါမယ်။ Mute ဟာ မေးဂရုစသည် တစ်ခုခုမှ ဖော်ဝပ်လုပ်လာသော၊ ကိုယ့်ဆီ တိုက်ရိုက် လိပ်မမူထားသောအီးမေးတွေမှာ သုံးစွဲလို့ ရပါတယ်။
ဖော်ဝပ်မေးများ၏ Thread ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ထို Thread ဟာ ကိုယ်စိတ်မဝင်စားသော (ကိုယ့်အတွက် ဆူညံသံဟု မှတ်ယူသော) ဖော်ဝပ်မေးဖြစ်ပါက ၎င်း မေးကို ဖွင့်၍ More Actions ထဲမှ Mute ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆို ထို Thread နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ နောက်ထပ်မေးတွေ ကိုယ် မမြင်ရတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဆီ တိုက်ရိုက်ပို့မလာမချင်း ပေါ့ဗျာ။ Mute ၏ shortcut key က m ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီမေး၏ settings ထဲမှာ ကီးဘုတ်ရှော့ကပ်တွေ on ထားမှသာ shortcut key ကို သုံးလို့ ရမှာပါ။
ချွင်းချက်က မိမိ၏ INBOX ထဲက အီမေးများကိုသာ Mute လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Filter ခံပီး label နှင့် ခွဲသိမ်းထားသော (INBOX ထဲတွင် ရှိမနေတော့သော) မေးများ၏ Thread ကို Mute မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
ထိုကဲ့သို့ Mute လုပ်လိုက်သော မေးများဟာ မပျောက်ဆုံးသွားပါဘူး။ ပြန်ဖော်ယူလိုပါက ဂျီမေး၏ search box တွင် is:muted ဟုရိုက်၍ ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတင်ပြလို့ အွန်လိုင်းယူဇာတိုင်းအတွက် အသုံးတည့်မယ်လို့တော့ ကျနော် မထင်မြင်ထားပါဘူး။ ဗဟုသုတ တခုအနေနဲ့ သိထားရအောင်ပါပဲဗျာ...။
Posted by Ko Gyii at 10:18 PM No comments :
Labels: features , Gmail , Google , is:mutted , labs , mute , အိုင်တီ
သင့်အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေကို အကောင်းအဆိုး ဘယ်လို ဆန်းစစ်ကြည့်မလဲ ?
10 Ways To Check If Your Online Friend Is A Bad Guy
အညွှန်း။ ။ ဒါ OSABlogger တစ်ဦးဖြစ်သူ Mr Bill Wardell က ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကမ္ဘာထဲ ကျင်လည်နေတဲ့ သူတွေအကြားမှာ ကြုံတွေ့လေ့ရှိတဲ့ အမှားတွေ၊ ပြင်ရန်နောက်ကျသွားတဲ့ အမှားအယွင်းတွေ ကနေ ကြိုတင်ရှောင်လွှဲနိုင်စေရန် ဖြစ်ပါတယ်။ သူရို့ဆီမှာတော့ ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ အွန်လိုင်းကမ္ဘာကြီးဖြစ်လေတော့ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့လာသူကို ရန်သူ၊ မိတ်ဆွေ ခွဲခြားဖို့ရာ အင်မတန် လိုအပ်ပါတယ်။ ပမာပြောရရင် နောက်ကျိနေတဲ့ ရေအိုင်ထဲက ရေသတ္တဝါတွေ လိုပါပဲ။ ခြေလှမ်းမှားတာနဲ့ ရန်သူ့ (ရေနောက်ထဲက မုဆိုး) အစားခံရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ အွန်လိုင်းဖရန့်များ ကြားမှာတော့ ဒီလောက် ရေမနောက်သေးတဲ့အတွက် အရေးမပါတာတွေ လာပြောနေတယ်လို့ ယူဆကောင်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်က ရေကြည်ထဲက ငါးတစ်ကောင် နေရာကပေါ့ဗျာ။ ရေနောက်ထဲ မဝင်မိသေးခင်မှာ ရေနောက်ထဲမှာ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေ သိထားလို့ မမှားဘူး ယူဆပါတယ်။ ပြောင်းပြန် ပြန်ပြောရရင် ကိုယ့်ရဲ့ အမူအကျင့်တွေက ရေနောက်ထဲက မုဆိုးတစ်ယောက်နဲ့ အသွင်တူနေလားလို့လည်း ပြန်ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေနောက်ထဲက မိတ်ဆွေစစ်ရှာချင်တယ်ဆိုရင် အမူအကျင့်ကို သတိထားရမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားပါက ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဖတ်ရလွယ်အောင် နင်၊ ငါ သုံးနှုန်းပါရစေ..
ဆိုင်ဘာ ရာဇဝတ်မှုတွေမှ ရှောင်လွှဲနိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်...။
နင် အထီးကျန်ဖြစ်ဘူးလား။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားတစ်ခုခုလောက် ပြောလိုက်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်ဘူးမှာပေါ့။ ဒါဆို အွန်လိုင်းပေါ်က နင့်စကားကို နားထောင်ပေးမဲ့သူ၊ ကူပီး ခံစားပေးမဲ့သူ တစ်ဦးဦးကို ရှာကြည့်ချင်မှာပဲ။ အွန်လိုင်းမှာက ချတ်ရွန်းတွေ၊ IM တွေကအစ ကမ္ဘာအနှံ့က သူတွေနဲ့ ပေးဆုံတွေ့နိုင်တဲ့ ဆားဗစ်တွေ အပုံအပင်ကိုး...အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွန်လွယ်ကူစွာ တစ်ဦးဦးနဲ့ ခင်မင်နိုင် ပီးတော့ ပိုပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး အကျွမ်းဝင်စေနိုင်တယ်လေ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နင် သူ့အာဝဇွန်းမမိခင်၊ သူလှည့်ဖျားတာ မခံရခင်မှာ...ဦးဆုံးသိထားဘို့က...သူ့ကိုယ်သူ ပြောပြောနေတဲ့ "သူ" ဟာ "အမှန်အကန်" လားဆိုတာ သေချာမှ ဖြစ်မယ်။ ဒီလို ပြောလို့ စိတ်မကွက်ပါနဲ့။ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ တွေ့ဆုံရင်းနှီးခင်မင်ပြီး ထာဝရ လက်တွဲသွားကြတဲ့ ဇတ်လမ်းတွေလည်း အများကြီးရှိသလို...အွန်လိုင်းပေါ်က လူစိမ်းကို ယုံမိလို့ အကွက်ဆင်ခံရ၊ အလွဲသုံးစားပြုခံရ၊ အသတ်တောင်ခံရတဲ့ ဇတ်လမ်းတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးဆိုတာ နင် သိမှာပါ။
အွန်လိုင်းပေါ်က သူငယ်ချင်းကို ဆန်းစစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိပါရဲ့...
၁) ပြီးပြည့်စုံသော လူဟူ၍မရှိ (Nobody Is That Perfect)
တကယ်လို့ နင်တွေ့တဲ့ သူ တစ်ယောက်က ဘားမှ ပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းနေတယ်ဆိုပါစို့.. ဒါဆို နင် ပြန်လှန် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘယ်သူမှ အောက်ပါအရည်အချင်းတွေ အကုန်လုံးနဲ့ မပြည့်စုံ နိုင်ဘူးလေ။ ဥပမာ သဘောလည်းကောင်း၊ ရုပ်ရည်လည်းချောမော၊ ပါရမီရှင်၊ ပီးတော့ ဆွဲဆောင်အားလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင် ဒါ တစ်ခုခုတော့ မှားနေလိမ့်မယ်။ သူ့မှာ ဘာအားနည်းချက် အမှားမှ မရှိနေဘူးလား...ခဏလေး စဉ်းစားကြည့်ပါဦး..ဒါဆို သူလို ဘာမှ ပြောစရာ မလိုအောင် ကောင်းမွန် ပြည့်စုံနေတဲ့ သူက နင့်က ဘာအတွက် အလောတကြီး အွန်လိုင်းကနေ ချဉ်းကပ်လာတာလဲ ဆိုတာကိုပေါ့...။
နင့် အွန်လိုင်း သူငယ်ချင်း တစ်ဦးဦးကများ နင့်ကို ဒီလို အင်တိုက်အားတိုက်နဲ့ ပိပိရိရိ ချဉ်းကပ်နေတယ်ဆိုရင်...နင် သူ့ အပြုအမူအပေါ် ဆန်းစစ်ဘို့တော့ လိုလာပါပြီ။
၂) စကား စကား ပြောပါများ စကားထဲက ဇာတိပြ (Read Between The Lines)
အွန်လိုင်းမှာ တွေ့တဲ့သူထက်စာရင် အပြင်မှာ လူချင်းတွေ့တဲ့ သူကို အကောင်းအဆိုး ဝေဖန် ပိုင်းခြားရတာ လွယ်ပါတယ်။ သူ့ အမူအရာ၊ မျက်နှာသွင်ပြင်၊ ကိုယ်နေဟန်ထား၊ လေသံ အပြောအဆိုကနေတဆင့် သူပြောနေတာ အမှန်အကန် ဟုတ်မဟုတ် သိနိုင်တယ်လေ။ ဆိုင်ဘာကမ္ဘာထဲက အွန်လိုင်းရွာမှာတော့ နင့်အနေနဲ့...သူ သုံးနှုန်းတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ဖြစ်မြဲကိစ္စတစ်ချို့အပေါ် သူ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကပဲ သူ အမှန်အကန် ဟုတ်မဟုတ် ဆန်းစစ်ခွင့် ရှိပါရဲ့..
အွန်လိုင်း သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဟာ အလိမ်အညာလား ဘာလားဆိုတာ အမိဖမ်းဘို့ရာ.. သူ ပြောတဲ့ စကားတွေကို အသေအချာ အာရုံစိုက်ကြည့်ဘို့ လိုပါတယ်။ လူမျိုးရေး၊ ဘဝခံယူချက်၊ဘာသာရေး၊ အိမ်ထောင်ကွဲခြင်းအပေါ်ခံယူချက်နှင့် နင့်အတွက် အရေးပါတဲ့ တခြားကိစ္စတွေ အပေါ်မှာ သူ ဘယ်လို တုံ့ပြန်သလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့် မှတ်သားရပါမယ်။ လူလိမ်၊ လူညာတွေဟာ ကိစ္စအမျိုးအမျိုး အတွက် မုသားမပါတဲ့စကားတွေ ကြိုမပြင်ထားနိုင်ပါဘူး။ နင် သူ့ကို စကားများများ ပြောကြည့်ရင် ပေါ်တာပါပဲ...။
၃) သူ အရမ်းဟော့နေလား (Too Hot To Handle)
တကယ်လို့ နင် မနုဿမုဆိုးရဲ့ သားကောင် မဖြစ်ချင်ရင်တော့ လိင်ကိစ္စအလို့ငှါ ပို့လာတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေကို သတိထား ကိုင်တွယ်ရလိမ့်မယ်။ နင့် အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းက ဒါမျိုးမှာ အလွန်ဟော့နေတယ်ဆိုရင်တော့ တနေ့နေ့ နင့်ကို သူ့ လိင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ရောက်အောင် မျှားခေါ်လိမ့်မယ်။ နင့်ကို တန်ဘိုးထားတဲ့ သူဆိုရင် ဒီလို လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်။
၄) သူများမကောင်းကြောင်းချည့် အတင်းကပ်တုပ်နေတတ်လား (Rants About Almost Everything)
သူများ မကောင်းကြောင်းချည့် အတင်းကပ်တုပ်နေတဲ့ သူမျိုးနဲ့ ဆုံမိတယ် ဆိုရင်...သူ့ကို နင် သတိထား ဆက်ဆံရလိမ့်မယ်။ နင့် ရွေးလိုက်တဲ့ အွန်လိုင်းကမ္ဘာထဲမှာ သူတွေက ဒီလိုမျိုး အစိုးရမကောင်းကြောင်း၊ ဘောစိမကောင်းကြောင်း၊ တွေ့ဘူးတဲ့လူတိုင်း မကောင်းကြကြောင်း ပြောတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်နေရင် နင် နောက်သာဆုတ်လိုက်ပါ။ နင်ဟာ ဒီလို သူများတကာပေးတဲ့ အပုပ်တွေ၊ အတင်းတွေ လိုက်ယူနေတဲ့ အပုပ်ချခံ တစ်ယောက် မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
၅) အန္တရာယ်အမြဲ လွယ်နေရတဲ့ ဘဝ (Likes To Live Dangerously)
နင့် အွန်လိုင်းဖရန့်ဟာ သူ ဥပဒေ ချိုးဖောက်တတ်တာကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ ပြောလေ့ရှိသလား ? လိုက်နာလို့လဲ ကိစ္စမရှိတဲ့ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးကအစ လိုက်ချိုးဖောက်နေတတ်တယ် ဆိုရင်တော့ သူ့မှာ သူများကို လေးစားတတ်တဲ့ စိတ် အာဏာပိုင်နဲ့ မသင့်မတင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာ ရှိနေပြီ။ ဒီလို လူမျိုးနဲ့ တာရှည် လက်တွဲဘို့ နင် စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူး မှတ်လား။
၆) ငွေတောင်းခြင်း (Asks For Money)
လူလိမ်လား လူညာလားလို့ သိနိုင်တဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုက နင့်ဆီက ငွေလာတောင်းတာပါပဲ။ ဒီလို မတောင်းခံခင်မှာ နင့်ကို ဘာမှ ဥပါဒ်မပေးပဲ လအတန်ကြာ ချတ်နေတတ်ပါတယ်။ ပထမတော့ နည်းနည်းပေါ့ နောက်တော့ ငွေ ပမာဏအများကြီး တောင်းတတ်ပါတယ်။
၇) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေ လိုချင်ခြင်း (Wants Personal Information)
နင့် ပါစင်နယ်တွေ ... ဥပမာ အသက်၊ ဝင်ငွေ၊ နာမည် အစစ်၊ လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်း၊ စီးပွားရေး စတာတွေကို အရမ်း စပ်စုလာပီ ဆိုရင် ဒါလည်း သင်္ကေတတစ်ခုပါပဲ။ နင် နဲ့ သူ ရဲ့ အွန်လိုင်းမှ ရင်းနှီးမှု့ ရဘို့အတွက် ဒါတွေ မလိုအပ်ဘူးလေ။ ဘာလို့ လာမေးတာလဲ ဆန်းစစ်ကြည့်ဦး...။
၈) အနိုင်ကျင့်တတ်ခြင်း (Loves To Bully)
သူ စိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာ၊ အနိုင့်ကျင့်တာ ခံရဘူးလား။ အနည်းအကျဉ်းလောက်ကော...? ခံရဘူးရင်တော့ သူဟာ သူများကို ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းလုပ်တတ်သူ၊ အနိုင်ကျင့်တတ်သူ ဖြစ်ဘို့ များနေပြီ။ အွန်လိုင်းပေါ်ကတောင် ဒီလို အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့၊ စိတ်ညစ်စေတဲ့သူနဲ့ ရေရှည်ဆက်ဆံဘို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
၉) အခုတွေ့ အခုကြိုက်လား (Professes His Or Her Love In Just A Few Days)
သူနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့တာ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်း နင့်ကို ချစ်ရေးဆိုလာလား? နင်တို့ချင်း တွေ့တောင် မတွေ့ဘူးပဲနဲ့လေ။ ဒါဆိုရင် သူမရိုးသားဘူး။ အန္တရာယ်များပါတယ်။ ချက်ချင်း ချစ်တတ်တဲ့သူတွေဟာ ချက်ချင်းမုန်းလွယ်တဲ့ လူစားမျိုးဆိုတာ သဘောပေါက်ထားပါ။ ဒီထက် ပိုဆိုးတာက လူလိမ်လူညာ ဆိုင်ဘာ ရာဇဝတ်သားတွေ အများစုဟာ နင့်ကို ချဉ်းကပ်ဘို့ရာ ချစ်ချင်ယောင်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်....။
၁၀) လူချင်းတွေ့ရအောင် လောဆောနေခြင်း (Forces You To Meet In Person)
အွန်လိုင်းဘော်ဒါက နင်နဲ့ လူချင်းတွေ့ရအောင် လောဆော်နေတယ်ဆိုရင်.. ခဏလေး ဟိုးထားပြီး သူ့အပြုအမူက ဘာကို ရည်ရွယ်သလည်းဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားပါဦး။ အတင်းအဓမ္မကြီး ဇွတ် တစ်ခုခုလုပ်ခိုင်းနေတာလား။ ဒါဆို အနိုင်ကျင့်တာပဲ။ အဓမ္မပြုမူခြင်းက သူဟာ အရမ်း အန္တရာယ်များတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သင်္ကေတပါပဲ...။
Source http://www.onlinesecurityauthority.com/thoughts-on-security/10-ways-to-check-if-your-online-friend-is-a-bad-guy/ ကို ဘာသာပြန်ဖော်ပြပါသည်။ ကွဲလွဲချက်ရှိပါက ဘာသာပြန်သူ၏ အားနည်းချက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကွဲလွဲချက်များကို ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုကြပါရန်။
ဒီစာကို ၂၀၁၀ခု ဇွန်လ၂၂ရက်နေ့က REAL FAMILY နဲ့ တောင်ကြီးဖန်မလီ မေးဂရုများမှာ ရေးတင်ခဲ့တာပါ။ အွန်လိုင်းကို တက်ခါစ ဗမာပြည်ထဲက ညီ၊ ညီမငယ်များ အတွက် လိုလိုမယ်မယ် ဆိုင်ဘာလောကအကြောင်းကို ဗဟုသုတ မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကူးယူဖော်ပြပါက မူရင်းအာဘော်မပျက်အောင် အပြည့်အစုံ ကူးယူဖော်ပြစေလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by Ko Gyii at 8:57 PM No comments :
Labels: friend , online , security , ဆိုင်ဘာကမ္ဘာ , အိုင်တီ , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
ထပ်ဆင့် ဓမ္မဒါန ပြုပါသည်...။
ဗြဟ္မာ နတ် လူ သုံးဘုံသူ တို့၏ ပူဇော် အထူးကို ခံတော်မူထိုက်ကြောင်းဖြစ်သော
သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်ဝိမုတ္တိဂုဏ် ၀ိမုတ္တိဉာဏ ဒဿနဂုဏ်တို့နှင့်
ပြည့်စုံတော်မူပေထသော သစ္စာဉေယျ ဓမ္မအပုံအလုံးစုံကို အကုန်မကျန်
မြတ်ရွှေဉာဏ်ဖြင့် အမှန်ထိုးထွင်း အလင်းထင်ပေါ် သိမြင်တော်မူပေထသော ဣဿရိယ
ဓမ္မယသ သီရိကာမပယတ္တ တည်းဟူသော ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော
မြတ်စွာဘုရားအား ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ ရှိခိုးခြင်းသည် ဖြစ်စေပါသတည်း ဘုရား။
တပါးသောအခါ၌ ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီ နေပြည်တော်ကြီး၏ အနီး၌
ရှေးခါခေတ်ဟောင်း ရသေ့သူမြတ်အပေါင်းတို့၏ သက်ဆင်းရာ သားသမင်အပေါင်းတို့ကို
ဘေးမဲ့ပေး၍ မွေးရာဖြစ်သော မိဂဒါဝုန်တောကြီး၌ သီတင်းသုံး နေတော်မူ၏။
ထိုသို့ သီတင်းသုံးနေတော်မူသောအခါ၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ကောဏ္ဍည အမှူး ငါးဦး အစု
အဝေးရှိကုန်သော ရဟန်းတို့ကို ခေါ်တော်မူ၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ သာသနာတော်ထမ်း ရဟန်းဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် နှစ်ပါးကုန်သော အစွန်းသမုတ်
အယုတ်ခေါ်ငြား ဤတရားတို့ကို မမှီဝဲအပ်ကုန်။
(ချစ်သားရဟန်းတို့) ယုတ်မာသော ရွာသူရွာသား မြို့သူမြို့သားတို့၏ လက်ကိုင်ဖြစ်သော ပုထုဇဉ်
သတ္တ၀ါတို့၏ အလေ့အမူအရာ ဖြစ်သော အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်မဆိုင်သော
အကျိုးတစုံတရာနှင့်မျှ မစပ်ယှဉ်သော လောကီအာရုံ ကာမဂုဏ်တို့၌ ကာမချမ်းသာကို
သာယာတုံငြား လိုက်စားအားထုတ်မှု ဟု ဆိုအပ်သော အကြင်အစွန်းသမုတ်
အယုတ်တရားမျိုးသည်လည်း ရှိလေ၏။ ကိုယ်ချမ်းသာမဖက် ဆင်းရဲမှုသက်သက်မျှသာ
ဖြစ်သော အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်မဆိုင်သော အကျိုးတစုံတရာနှင့် မစပ်ယှဉ်သော
ရေချိုးမီးလှုံ ဆူးပုံ၌အိပ်ခြင်း အစရှိသည့် မိမိကိုယ်ပင်ပန်းအောင်သာ
လွန်စွာကြိုးပန်းလေ့ရှိသော အကြင်အစွန်းသမုတ် အယုတ်တရားမျိုးသည်လည်း
ချစ်သားရဟန်းတို့ စင်စစ် နှစ်ပါးကုန်သော ထို အစွန်းသမုတ် အယုတ်တရားတို့ကို မကပ်မရောက်မူ၍ ငါဘုရားသည် အကြင်အလယ်လမ်းဟု
ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်ကို သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်အလင်းဖြင့် ထိုးထွင်း၍
(ထို အလယ်လမ်း ဟု ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်သည်)
ချစ်သားရဟန်းတို့ ငါဘုရားသည် အကြင်အလယ်လမ်းဟု ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်ကို
သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်အလင်းဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူအပ်လေပြီ။
ထို အလယ်လမ်း ဟု ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်သည် အဘယ်နည်း။
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လက်ကိုင်ဖြစ်၍ မြင့်မြတ်သော အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဤ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး
ချစ်သားရဟန်းတို့ ဤအလယ်လမ်းဟု ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်ကို ငါဘုရားသည်
သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်အလင်းဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူအပ်လေပြီ။
ဤအလယ်လမ်း ဟု ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်သည်
ချစ်သားရဟန်းတို့ ဤ ဆင်းရဲခြင်း သဘော ဟု ဆိုအပ်သော မဘောက်မပြန် မှန်ကန်သော အရိယ သစ္စာ တရားသည်
မချစ်မနှစ်သက်အပ်ကုန်သော သူတို့နှင့် အတူတကွ ပေါင်းသင်း၍ နေရမှုကြီးသည်လည်း ဆင်းရဲ၏။
ချစ်နှစ်သက်အပ်ကုန်သော သူတို့နှင့် ကွေကွင်းခွဲခွါ၍ နေရမှုကြီးသည်လည်း ဆင်းရဲ၏။
အကြင် တောင့်တခြင်း အလို ရှိခြင်းကိုလည်းမရ၊ ထို လိုအင်ဆန္ဒဖြင့် တောင့်တတိုင်း
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဥပါဒါန်တရားတို့၏ စွဲလမ်းရာ ဖြစ်ကုန်သော ခန္ဓာ ငါးပါးတို့သည် ဆင်းရဲ အစစ်တို့ သာတည်း။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ဤဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သော မဘောက်မပြန် မှန်ကန်သော အရိယ သစ္စာ
မြဲသည် ဟု အယူရှိ၍ သဿတဒိဋ္ဌိ နှင့် ယှဉ်သော တဏှာ၎င်း
မမြဲ ဟု အယူရှိ၍ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ နှင့် ယှဉ်သော တဏှာ၎င်း
ချစ်သားရဟန်းတို့ ဤ ဒုက္ခခပ်သိမ်းတို့၏ ချုပ်ငြိမ်းမှု သဘောကြီး ဖြစ်သော မဘောက်မပြန်
မှန်ကန်သော အရိယသစ္စာ တရားသည် ရှိ၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ဤ ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ငြိမ်းမှု နိဗ္ဗာန်သို့ ဆိုက်ရောက်ကြောင်း အကျင့်မြတ်
သဘောကြီး ဖြစ်သော မဘောက်မပြန် မှန်ကန်သော အရိယ သစ္စာတရားသည် ရှိ၏။
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လက်ကိုင်ဖြစ်၍ မြင့်မြတ်သော အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဤ
(ဤ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး တရား အကျင့်လမ်းကြီးပင်လျှင်တည်း)
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ ဤ တေဘုမ္မက ၀ဋ်တရားစုသည် ဆင်းရဲစင်စစ် အမှန် ဖြစ်သော အရိယာ သစ္စာကြီး တပါး ဟူ၍ ”
ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရား မဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ ဆင်းရဲစင်စစ် အမှန် ဖြစ်သော ဤအရိယသစ္စာတရား ကို ပိုင်းပိုင်း ခြားခြား
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သိအပ်သိထိုက်၏-ဟူ၍ ” ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ
ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သိခြင်းကိစ္စ ပြီးစီးလေပြီ ”-ဟူ၍ ငါဘုရားသည်
ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ ဤ တပ်မက်သာယာသော တဏှာလောဘသည် ဆင်းရဲခြင်း ၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သော
အရိယာသစ္စာကြီး တပါး ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ ဆင်းရဲခြင်း ၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သော ဤ အရိယ သစ္စာတရားကို ကြွင်းမဲ့ဥဿုံ
အလုံးစုံ ပယ်သင့်ပယ်ထိုက်၏ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌
တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
အလုံးစုံ ပယ်ခြင်းကိစ္စ ပြီးပြီ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ဤ နိဗ္ဗာန်သည် ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ ဇာတ်သိမ်းရာ အမှန် ဖြစ်သော
အရိယသစ္စာတပါး ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ ဇာတ်သိမ်းရာ အမှန် ဖြစ်သော ဤ
အရိယသစ္စာတရားကို ကိုယ်တိုင် ဆိုက်ရောက် မျက်မှောက် ပြုအပ် ပြုထိုက်၏ ” ဟူ၍
ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော
အရိယသစ္စာတရားကို ကိုယ်တိုင် ဆိုက်ရောက် မျက်မှောက် ပြုခြင်းကိစ္စ ပြီးပြီ ”
ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ဤမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတရားအစုသည် ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ ဇာတ်သိမ်းရာ
အမှန် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကောင်းလမ်းမှန် ဖြစ်သော အရိယ
သစ္စာကြီးတပါး” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ ဇာတ်သိမ်းရာ အမှန် နိဗ္ဗာန်သို့
ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကောင်းလမ်းမှန် ဖြစ်သော ဤ အရိယသစ္စာတရားကို ဘာဝနာ
အလုပ်ဖြင့် အားထုတ်ကြိုးစား ပွါးများအပ် ပွါးများထိုက်၏ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည်
ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကောင်း လမ်းမှန် ဖြစ်သော ဤ အရိယ သစ္စာတရားကို
ပွါးများခြင်း ကိစ္စ ပြီးပြီ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌
တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌ မြင်နိုင်တုံဘိ ဉာဏ်မျက်စိသည်
ချစ်သားရဟန်းတို့ အကြင်မျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး ငါဘုရားအား လေးပါးကုန်သော ဤ မဘောက်မပြန်
မှန်ကန်တုံလတ် အရိယ သစ္စာမြတ်တို့၌ ဤသို့ ပြဆိုအပ်ပြီးသောအတိုင်း သစ္စဉာဏ်
ကိစ္စဉာဏ် ကတဉာဏ်အားဖြင့် စက်လည်ပုံ သုံးပါးရှိသော သုံးပါး လေးလီအားဖြင့်
အခြင်းအရာ တဆယ့်နှစ်ပါးရှိသော ဟုတ်မှန်သောအတိုင်း ပိုင်းခြားထင်ထင်
ဉာဏ်အမြင်သည် စင်စင်ကြယ်ကြယ် မဖြစ်ပေါ်လာသေး။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ထိုမျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး ငါဘုရားသည် နတ်ပြည်နှင့်တကွ ဖြစ်သော မာရ်
နတ်လွှမ်းခြုံ ၀သ၀တ္တီဘုံနှင့်တကွဖြစ်သော ဗြဟ္မာ့ဘုံနှင့်တကွဖြစ်သော အနန္တ
စကြာဝဠာ ကမ္ဘာ လောကဓာတ်တိုက်ဘောင်အတွင်း၌ ရဟန်းပုဏ္ဏားနှင့်တကွဖြစ်သော နတ်လူ
နှင့်တကွ ဖြစ်သော သတ္တ၀ါများအလယ်၌ “အတုမရှိသော ဘုရားဖြစ်ရန် သဗ္ဗညုတ
ရွှေဉာဏ်ကို ပိုင်ပိုင်ရရှိ ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူပြီ” ဟူ၍ ၀န်ခံတော် မမူသေး။
ချစ်သားရဟန်းတို့ အကြင်အခါ၌သာလျှင် ငါဘုရားအား လေးပါးကုန်သော ဤ မဘောက်မပြန် မှန်ကန်တုံလတ်
အရိယ သစ္စာမြတ်တို့၌ ဤသို့ ပြဆိုအပ်ပြီးသောအတိုင်း သစ္စဉာဏ် ကိစ္စဉာဏ်
ကတဉာဏ်အားဖြင့် စက်လည်ပုံ သုံးပါးရှိသော သုံးပါး လေးလီအားဖြင့် အခြင်းအရာ
တဆယ့်နှစ်ပါးရှိသော ဟုတ်မှန်သောအတိုင်း ပိုင်းခြားထင်ထင် ဉာဏ်အမြင်သည်
ချစ်သားရဟန်းတို့ ထိုအခါ၌သာလျှင် ငါဘုရားသည် နတ်ပြည်နှင့်တကွ ဖြစ်သော မာရ်နတ် လွှမ်းခြုံ ၀သ၀တ္တီဘုံ
နှင့်တကွဖြစ်သော ဗြဟ္မာ့ဘုံနှင့်တကွဖြစ်သော အနန္တ စကြာဝဠာ
ကမ္ဘာ လောကဓာတ်တိုက်ဘောင်အတွင်း၌ ရဟန်းပုဏ္ဏားနှင့်တကွဖြစ်သော နတ်လူ နှင့်တကွ
ဖြစ်သော သတ္တ၀ါများအလယ်၌ “အတုမရှိသော ဘုရားဖြစ်ရန် သဗ္ဗညုတ ရွှေဉာဏ်ကို
ပိုင်ပိုင်ရရှိ ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူပြီ” ဟူ၍ ၀န်ခံတော် မူပြီ။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ငါဘုရား၏ ဟုတ်တိုင်းအမှန် အမြင်သန်သော ပစ္စဝေက္ခဏာ ဉာဏ်တော်သည်
ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပြီ။ ငါဘုရား၏ အရဟတ္တဖိုလ် ဉာဏ်တော်သည် မပျက်မစီးနိုင်
ခံ့ခိုင်တည်တံ့လေပြီ။ ငါဘုရား၏ ဤ ဘ၀ အဖြစ်သည် အဆုံးစွန်သော အဖြစ်ပေတည်း။
ယခု အခါ၌ ဘ၀ အသစ် တဘန်ဖြစ်ဘို့ အရေးသည် မရှိတော့ချေ။ ဤသို့ ဉာဏ်အမြင်သည်
ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဤ ဓမ္မစက္က ပ၀တ္တန သုတ္တန်ကို ပဌမ လက်ဦး မြွက်ကျူး ဟောကြားတော်မူလေ၏။
ကောဏ္ဍည အမှူး ငါးဦး အစုအဝေးရှိ ကုန်သော ရဟန်းတို့သည် ဘုန်းတော်ကြီးသော
မြတ်စွာဘုရား၏ ဟောတော်မူ အပ်သော တရားတော်ကို အရိယသစ္စဉာဏ် ထက်သန် ပွင့်လင်း
၀မ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြကုန်သည် ဖြစ်၍ ရွှင်လန်းအားရ နှစ်သက်ကြလေကုန်သတည်း။
ဂါထာမဖက် စုဏ္ဏိယ သက်သက် ဖြစ်သော ဤ ဓမ္မစက္က ပ၀တ္တန သုတ်တော်ကြီးကို ဟောတော်မူအပ်သည်
ရှိသော် ရှည်သော အသက်တော်ရှိသော အရှင် ကောဏ္ဍည မထေရ်အား ကိလေသာ မြူတို့မှ
စင်ဖြူကင်းဝေးသော မှောက်မှားဒိဋ္ဌိ အညစ်အကြေး မရှိသော သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ် ဟု
ဆိုအပ်သော တရားမျက်လုံးသည် ထင်ရှားစွာ ပေါ်ပေါက်လေ၏။
“အလုံးစုံသော တေဘုမ္မက၀ဋ်ဒုက္ခတရားစုသည် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းလျှင် အကြောင်းရင်းရှိ၏။
ထိုအလုံးစုံသော တေဘုမ္မက၀ဋ်ဒုက္ခတရားစုသည် မကြွင်းမကျန် အမှန်ချုပ်ဆုံးခြင်း
သဘောရှိ၏။” (ဤသို့ ဟုတ်တိုင်းမှန်သိ ဉာဏ်မျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။)
ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဓမ္မစကြာသုတ်တော်ကြီးကို ဟောတော်မူ အပ်ပြီးသည် ရှိသော်ကား
ဘုမ္မစိုးနတ်တို့သည် ကောင်းချီးဆူညံ ဟစ်ကြွေးသံကို တပြိုင်နက်
“အို နတ်များအပေါင်းတို့ ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီ နေပြည်တော်ကြီး၏ အနီး၌ သားသမင်အပေါင်းတို့ကို
ဘေးမဲ့ပေး၍ မွေးရာဖြစ်သော ရသေ့ သူမြတ် အပေါင်းတို့၏ ဆင်းသက်ကျရောက်ရာ
ဖြစ်သော မိဂဒါဝုန်တောကြီး အတွင်း၌ အတုမရှိသော ဤ ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကို
ဟောတော်မူအပ်ပေပြီ။ ဤ ဓမ္မစကြာ တရားတော်မြတ်ကို ရဟန်းသည်၎င်း ပုဏ္ဏားသည်၎င်း
နတ်သည်၎င်း မာရ် နတ်သည်၎င်း ဗြဟ္မာသည်၎င်း အနန္တ စကြာဝဠာ ဤ ကမ္ဘာ လောကဓာတ် တိုက်ဘောင်
အတွင်း၌ တစုံတယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ၎င်း မဆီးတား မကန့်ကွက်နိုင်ချေ”
ဘုမ္မစိုးနတ်တို့၏ ကြွေးကြော်သံကို ကြားကြကုန်သည်ရှိသော် စာတုမဟာရာဇ်နတ် အများတို့သည် ကောင်းချီးဆူညံ
ဟစ်ကြွေးသံကို တပြိုင်နက် ကြွေးကြော်ကြလေကုန်၏။
“အို နတ် ဗြဟ္မာများ အပေါင်းတို့ ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီ နေပြည်တော်ကြီး၏ အနီး၌
သားသမင်အပေါင်းတို့ကို ဘေးမဲ့ပေး၍ မွေးရာဖြစ်သော ရသေ့ သူမြတ် အပေါင်းတို့၏
ဆင်းသက်ကျရောက်ရာ ဖြစ်သော မိဂဒါဝုန်တောကြီး အတွင်း၌ အတုမရှိသော ဤ
ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကို ဟောတော်မူအပ်ပေပြီ။ ဤ ဓမ္မစကြာ တရားတော်မြတ်ကို
ရဟန်းသည်၎င်း ပုဏ္ဏားသည်၎င်း နတ်သည်၎င်း မာရ် နတ်သည်၎င်း ဗြဟ္မာသည်၎င်း အနန္တ စကြာဝဠာ ဤ ကမ္ဘာ
လောကဓာတ် တိုက်ဘောင် အတွင်း၌ တစုံတယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ၎င်း မဆီးတား
ဤသို့လျှင် ထိုခဏအတွင်း၌ ထိုလယအတွင်း၌ ထိုမုဟုတ်အတွင်း၌ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ့ဘုံ တိုင်အောင်
ကျော်စောသော အသံသည် အဆင့်ဆင့် ပျံ့နှံ့၍ တက်လေ၏။
ဤ စကြာဝဠာ အပေါင်း လောကဓာတ် တိုက်တသောင်းသည်လည်း အောက်သို့နိမ့်လျက် တသိမ့်သိမ့်
နတ်အပေါင်း ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့၏ တန်ခိုးအလုံးစုံကို သိမ်းခြုံလွှမ်းမိုး၍ စကြ၀ဠာ အပေါင်း လောကဓာတ်
တိုက်တသောင်း၌ အတိုင်းမသိ နှိုင်းယှဉ်ဘွယ်မရှိသော ကြီးကျယ် မွန်မြတ်သော
ရောင်လျှံထိန်ညီး အလင်းဓာတ်ကြီးသည် အဆန်းတကြယ် အံ့သြဘွယ် ဖြစ်ပေါ်လာ၏။
ထိုအခါ၌ ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ၀မ်းမြောက်မြွက်ကြား ဤ ဥဒါန်းတော်
အို လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့ ငါ့ သားတော်ကြီးဖြစ်သော ကောဏ္ဍညသည် အသိဉာဏ် အလင်းပေါက်၍ သောတာပန်အဖြစ်သို့
ဤ ဥဒါန်းစကားတော်အားဖြင့် ရှည်သောအသက်တော်ရှိသော အရှင် ကောဏ္ဍည မထေရ်
မြတ်ကြီးအား အညာသိ ကောဏ္ဍည ဟူ၍သာလျှင် ဤ အမည်ထူးသည် ဖြစ်လေသတည်း။
ထို သောတာပန် ဖြစ်ပြီးသောအခါ၌ ရှည်သော အသက်တော်ရှိသော အရှင် အညာသိ ကောဏ္ဍညသည်
ကိုယ်တိုင် မြင်အပ်ပြီးသော တရားရှိသည်ဖြစ်၍
ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် သက်ဝင်အပ်ပြီးသော တရားရှိသည်ဖြစ်၍
ကြောက်ရွံ့မှုကင်းလျက် ရဲရင့်ခြင်းသို့ ရောက်သည်ဖြစ်၍
မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်အတွင်း၌ သိမြင်ပြီးသော ဉာဏ် အစွမ်းအားဖြင့် သူတပါးတို့အား ယုံကြည်အားထားခြင်း
မရှိလေသောကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားကို ဤသို့သော စကားကို
“အရှင်ဘုရား - တပည့်တော်သည် ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရား၏ အထံတော်၌ ရဟန်းအဖြစ်ကို ရလိုပါသည်ဘုရား။ ပဉ္ဇင်းအဖြစ်ကို
ရလိုပါသည်ဘုရား။” ဤသို့ လျှောက်ထား တောင်းပန်လေ၏။
“အို ရဟန်း လာလော့ ငါဘုရားသည် တရားတော်မြတ်ကို ကောင်းစွာ ဟောကြားတော် မူအပ်ပြီ။ သံသရာ ၀ဋ်ဆင်းရဲ၏ ကိစ္စတုံး၍
အဆုံးတိုင်အောင် ပြုခြင်းငှာ ကောင်းစွာ မြတ်သော မဂ်အကျင့်ကို ကျင့်လေလော့”
ဤသို့ မိန့်တော်မူ၏။ ရှည်သော အသက်တော်ရှိသော ထို အရှင် ကောဏ္ဍညအား ထို ဧဟိဘိက္ခု -
ပဉ္ဇင်း အဖြစ်သည်သာလျှင် ဖြစ်လေသတည်း။
Those two extremes, Bhikkhus, should not be followed by one who has given up the
Now, Bhikkhus, by avoiding both these extremes, there isamiddle course,
fully understood by the Tathagata.
It is that craving, which is potent for rebirth, is accompanied by pleasure and lust, seeking satisfaction, now
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE UPRISING OF SUFFERING MUST BE
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE CESSATION OF SUFFERING MUST BE
Light arose, “THAT, THIS IS THE NOBLE TRUTH OF THE COURSE LEADING TO THE CESSATION OF
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE COURSE LEADING TO THE CESSATION
OF SUFFERING HAS BEEN DEVELOPED.”
And so long, Bhikkhus, the Vision of Knowledge of these Four Noble Truths with the three sections
and twelve modes as they really are, was not well purified by me, So
long was I, Bhikkhus, could not admit that “I wasaperfect Buddha who
had attained the full supreme ENLIGHTENMENT, in the midst of the world
with its Devas, with its Maras, with its Brahmas, with its Recluses and
Brahmas, its creatures with Devas and Men.”
But when, Bhikkhus, the Vision of knowledge of these Four Noble Truths, with the three
sections and twelve modes, as they really are, was well purified by me.
Then, Bhikkhus, I could admit that “I wasaperfect Buddha who had
attained the full supreme ENLIGHTENMENT, in the midst of the world with
its Devas, with its Maras, with its Brahmas, with its Recluses and
Brahmans, its creatures with Devas and Men.”
Moreover, the Vision of knowledge arose to me, “Unshakable is freedom for me, this is
the last birth, now there is no rebirth.”
This is what the Bhagava had said, and the group of five Bhikkhus were delighted and
rejoiced at what the Bhagava had said.
Further-more, while this explanation was being uttered, Vision of the Dhamma, dustless,
stainless arose to the Venerable Kondanna.
And when the Bhagava had proclaimed the discourse on the turning of the
Wheel of Dhamma, The Earth Devas raised the shout.
“The supreme Dhamma wheel proclaimed by the Bhagava in Benares at the deerpark,
Isipatana cannot be contradicted byarecluse, or Brahman or Deva or by
Mara or by Brahma or by anyone in the world.”
“The supreme Dhamma wheel proclaimed by the Bhagava in Benares at the deerpark, Isipatana, cannot be contradicted by
a recluse, or Brahman or Deva or by Mara or by Brahma or by anyone in
And the Ten Thousand-Fold World-system trembled, quaked and quaked again, shook
violently to and fro.
“May I, Bhante, get to leave the world in the presence of the Bhagava, May I
get the ordination?”
“Come, Bhikkhu, The Dhamma has been well expounded, Practice the holy life rightly, For
making an end of suffering.”
ကိုစိုးမင်း ( ကျီးသဲ )
Posted by Ko Gyii at 3:46 PM No comments :
Labels: ဓမ္မစကြာ , ပါဠိ , ဘာသာရေး , မြန်မာ , အင်္ဂလိပ်
ခင်ဗျားရင်ထဲမှာကော တေးတစ်ပုဒ်ရှိလား။ ဖွင့်ထုတ်ပစ်လိုက်ချင်တာမျိုးလေ တစ်ခုခုပေါ့။
ဆော့ဝဲဂျိုင်းယန့်ကြီး မိုက်ကရိုဆော့က ဆော့ဝဲတစ်ခုထုတ်လုပ်လိုက်လေရဲ့။
Microsoft Songsmith တဲ့။ ခင်ဗျားရင်ထဲက တေးသွားအတိုင်း သူက လိုက်တီးခတ်ပေးပါ့မယ်တဲ့။
ဘာလိုအပ်မလဲဆိုတော့ အသံသွင်းဖို့ မိုက်နဲ့ ပြန်နားထောင်ဖို့ နားကြပ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။
ကျနော့်လို ရေချိုးခန်း အဆိုတော်တွေ အကြိုက်ပေါ့။ (အသံဝါ၊ အသံပြာ ပြောချင်သလိုပြော၊ အသံမကောင်းဘူးပေါ့လေ)
ဆိုချင်တာ ဆို..ဘယ်တီးဝိုင်းမှ ငှါးစရာမလိုတော့ဘူး။ ဂီတနှုတ် မကျွမ်းလည်း ရပါတယ်တဲ့။ ဘာကော့နဲ့ ဆိုချင်လည်း ဆိုချင်တာသာ ရွေးလိုက်ပါ။ သီချင်းအလိုက်ကို ခံစားပြီး တေးသွား ရအောင် ဖော်ပေးမယ် ဆိုသဗျ။ ကာရာအိုကေနဲ့ ဘာကွာလဲဆိုတော့ ကာရာအိုကေနဲ့က သူများဆိုထားတဲ့ သီချင်းအဟောင်းကိုပဲ ဆိုလို့ရတယ်။ ဒီဟာက ခင်ဗျားရဲ့ ရေတွင်းဖြစ်ကို လိုက်တီးခတ်ပေးမတဲ့။
လက်တို့လိုက်ပါရဲ့ စိတ်ဝင်စားရင် စမ်းကြည့်လိုက်နော်။ trial ပဲဗျ။ ကရက်လုပ်ထားတာတော့ ရှာကြည့်ရဦးမယ်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် လင့် http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/songsmith/download.html
နမူနာ တီးပြခြင်းက ဒီမှာ http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/songsmith/videos/StartANewSong.wmv
ဆော့ဝဲကြော်ငြာပေါ့ဗျာ။ အဲ..ကြော်ငြာခတစ်ပြားမှ မရပါ။ :)
Posted by Ko Gyii at 8:46 PM No comments :
Labels: Everyone hasasong inside , songsmith , မိုက်ကရိုဆော့ , အိုင်တီ , ဆော့ဝဲ , ဖျော်ဖြေရေး
ကိုယ်ပိုင် အီးမေး (POP3 Email Subscribed Account) ရှိရင် လွယ်ပါတယ်။ Microsoft Outlook ဒါမှမဟုတ် Mozilla ThunderBird မှာ အဲ့ဒီ Function ပါပါတယ်။ ပို့ရမည့် အချိန်မှာ ကွန်ပျူတာပိတ်ထားမိတာ၊ မီးပျက်နေတာ၊ အီးမေးကြောင်နေ၊ အင်တာနက် အောက်နေတာ စတဲ့ ပြဿနာတွေတော့ ရှိပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် အီးမေးမရှိရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဝက်မေး Web-mail ပဲ အားကိုးရမှာပါ။ ဂျီမေးက ဒီ feature ကို support မလုပ်ပါဘူး။ တခြား ဆားဗစ်တစ်ခုခုနဲ့ ပို့ရပါမယ်။ ပို့ရမည့် အချိန်မှာ ဆားဗစ်အောက်နေတာ၊ ဆားဗစ်မပေးတော့တာ၊ ဆက်ဆက်ပို့ပေးဖို့ ဘာဂရန်တီ အာမခံချက်မှ မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ တချို့က ငွေပေးမှ ရပါတယ်။ ဇကာစစ်လိုက်တော့ Timecave တစ်ခုပဲ တင်ပါတယ်။ အောက်က ဇယားကို ရှုပါ။ ဆားဗစ် အသစ်သစ်တွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဂူးဂဲလ်ခေါက်ရှာကြည့်ပါ...
အောက်ပုံမှာ Microsoft Outlookနဲ့ဆို ဘယ်လို ပို့ရမလဲ သရုပ်ပြထားပါတယ်။ ဘယ်သူ့ဆီမှ မပို့ခင် မိမိကိုမိမိ အရင်လိပ်မူပြီး စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ.. /ဧးသိမ်း/
-> Create New Message
-> Option ဆိုရောက်ပါပီ။
Posted by Ko Gyii at 6:29 PM No comments :
Labels: outlook , အိုင်တီ , အီးမေးလ် , ဆော့ဝဲ
Antibacterial Soap ခေါ် ပိုးသတ်ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာများ ၏ ပြဿနာ
source: The Voice Journal vol-6/ No-29
Posted by Ko Gyii at 5:04 PM No comments :
Posted by Ko Gyii at 5:02 PM No comments :
တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် ရာသီခွင် မတူတာ ဘာဖြစ် လို့လဲ ဆိုတော့.
တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် ရာသီခွင် မတူတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့...
ဧဝံမေသုတံ.လိုက်ဦးမယ်။ အဟမ်း အဟမ်း။
အင်တာနေရှင် စံဖြစ်တဲ့ Gregorian calendar က နေသွားပြက္ခဒိန်နာရီ ဆိုပေမည့် လေးနှစ်မှာ တစ်ရက်စာကျော်ကျော် ကွာနေသေးလို့ ၄နှစ်တစ်ခါ တစ်ရက်ထပ်ပေါင်းပေးရပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပြက္ခဒိန်ကိုပဲ အမေရိကန်ကကော ဗမာကပါ အသုံးပြုကြပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ ဒီအတိုင်းသာ လေးနှစ် တစ်ရက်ပေါင်းနဲ့ ဆက်သွားနေရင် အေဒီ4092ခုနှစ် ရောက်သော် ဆိုလာ ပြက္ခဒိန် (Solar Calendar) နဲ့ တစ်ရက်တင်းတင်း ကွာဟသွားမယ် ဆိုပါတယ်။)
Zodiac ခေါ်တဲ့ ၁၂ရာသီခွင်ဆိုတာက ကမ္ဘာက နေကို သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း တပတ်တင်းတင်းပတ်မိတဲ့ကာလ <ဆိုလာ ပြက္ခဒိန် (Solar Calendar)> ကို သက်ဆိုင်ရာ နက္ခတ်တွေညွှန်းပြီး ခွဲခြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Gregorian calendar က သူ့ကို တစ်ရက် လိုက်လိုက် ညှိနေရတာကို ၄နှစ်တစ်ခါ ကြုံနေရမှာပါ။
တစ်နှစ်မှာ နေ့တာ၊ ညတာတူတဲ့နေ့ နှစ်နေ့ ရှိပါတယ်။ ထိုနေ့တွေကတော့...
Vernal equinox (March equinox) က နွေဘက်မှာ ကျပါတယ် March 20/21 လောက်ပေါ့။
Autumnal equinox (September equinox) က ဆောင်းဘက်မှာ ကျပါတယ် September 22/23 လောက်ပေါ့။
၁၂ရာသီခွင်၏ အစဖြစ်တဲ့ Aries ဟာ ထို March equinox တွင် အမြဲ စတင်ပါတယ်။ ထို ရက် ၄နှစ်တစ်ခါ တစ်ရက်စာ အတိုး/အဆုတ် ပြောင်းလဲခြင်းကို လိုက်၍ အခြားရာသီခွင်၏ အဝင်ရက်များပါ တစ်ရက်စာ အတိုး/အဆုတ် ရှိပါတယ်။
အိုက်စိုင်းပြောတဲ့ ရက်က ရာသီခွင် တစ်ခုခု၏ အဝင်ရက် ဖြစ်နေတာမို့လို့ ထိုကဲ့သို့ တစ်ရက်စာ အတိုး/အဆုတ်ပြောင်းလဲနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရက်မျိုး မွေးတဲ့လူအတွက် နက္ခတ်ဗေဒင် ဖတ်ဖို့ရာ ကိုယ်မွေးတဲ့ရက်က ကိုယ့်မွေးနှစ်မှာ ဘာရာသီခွင် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မှတ်သားပြီးမှ အဲ့ဒီ ရာသီခွင်အဟောကို ဖတ်တာ ပိုသင့်တော်မယ် ထင်ပါကြောင်း...။
2010/6/4 *အိုက်စိုင်း* <softwing.sai>
ဒါနဲ့ မေးရဦးမယ် .. ကျွန်တော်က nov 22 မှာမွေးတယ်
အဲဒီနေ့က တစ်နှစ် နဲ့ တစ်နှစ် ရာသီ မတူဘူး
တခါတလေ scorpio ထဲရောက်တယ် တခါတလေ Sagittarius ထဲရောက်တယ် ... အဲတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ
Posted by Ko Gyii at 10:39 PM No comments :
ကုသိုလ်လေး တစ်ပဲလောက်များ ရမလားလို့... မနေ့က ကျနော် နာယူမိတာလေး ဝေမျှပေးချင်ပါရဲ့။ ဝါးတားတား ဖြစ်နေတာလေးတွေ ဆရာတော်ဥူးသုမင်္ဂလ၏ တရားတော်နာမိမှပဲ ရှင်းသွားတော့တယ်။ :)
[caption id="attachment_225" align="alignleft" width="221" caption="မိဂဒါဝုန်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလ"] [/caption]
ဆရာတော်က မေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့ အစပြုထားပါတယ်။ "ဘုရားကို ဘာလို့ ရှိခိုးတာလဲ"တဲ့။ တိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခုလောက် မိတ်ဆွေမှာ ရှိပါသလား။ ထိုတရားနာနေစဉ်အချိန်တုန်းက ကျနော့်မှာ ဆရာတော့်မေးခွန်းအတွက် တိကျတဲ့ အဖြေမရှိနေခဲ့ဘူးခင်ဗျ။ ဒါနဲ့ပဲ တရားဝင်ထောက်ဘို့နေနေသာ၊ တေမိလုပ်ပြီး၊ ခပ်ကုပ်ကုပ်လေး ဆက်နာရတော့တာပေါ့။ ဆရာတော်သာ သိရင် "ဟေ့! ဒီမယ် နေပါဦး... မင့်က ဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲကွ?" လို့ ထကောမှာ အသေချာပါပဲ။ ဒီမေးခွန်းအပေါ် မိတ်ဆွေမှာ ရှိထားတဲ့ အဖြေလေးတွေနဲ့ ဆရာတော်၏ တရားအဖြေ ကိုက်၊ မကိုက် တိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ...
- သစ္စာလေးပါးတရားကို ဆရာမကူပဲ မိမိဘာသာ ထိုးထွင်းသိမြင်သူ။
- ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ။
- ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဘုရား ဟူသည်?
- ကယ်တင်ရှင်မဟုတ်၊ ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်၊ ကောင်းကင်မှ ကျလာတာမဟုတ်။
အမြဲမှန်ကန်သောတရားကို သင်ကြားပြသ၍ နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် ဆုံးမတတ်သူ။
- အမြဲ မှန်ကန်သော တရား။ ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသော အဆုံးအမ။
(ကောင်းတာလုပ်လျင် ကောင်းကျိုးရမည်။ မကောင်းတာလုပ်လျင် တူညီသောအကျိုးကို
ဘုရားကို ဘာလို့ ရှိခိုးလဲ?
ဘုရား၏ ကျေးဇူးက ဘာကျေးဇူးလဲ ?
- ဓမ္မ (အမြဲတမ်း မှန်ကန်သော တရား)ကို ဟောဆိုညွှန်ပြဆုံးမပေးခြင်း။
ဘုရားကို ဘယ်လို ကျေးဇူးဆပ်မလဲ ?
- ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ​၌ လိုက်နာ၊ ကျင့်ကြံ၊ နေထိုင်ခြင်းဖြင့်။
ဓမ္မ၏ အနှစ်ချုပ် ရှိပါသလား?
အနှစ်သာရ ရှိသော အရာတိုင်းမှာ အနှစ်ချုပ်ဆိုတာရှိ၏။
ထို့အတူ ဓမ္မခန္တာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်၏ အနှစ်သာရမှာ...
အပမာဌ တရား ဖြစ်၏။ (၎င်းမှာ...မမေ့မလျော့ခြင်းတည်းဟူသော တရားဖြစ်၏။
ကောင်းမှုလုပ်ဖို့လည်း မမေ့နှင့်။ မကောင်းတာ မပြုမိဖို့လည်း
ဒုက္ခသစ္စာ = ဤခန္တာ၏ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခတည်းဟူသော အမှန်တရားကိုသိခြင်း။
သမုဒယသစ္စာ = ဤခန္တာကြောင့်ဖြစ်သော တပ်မက်မှုများကို သိမြင်ခြင်း။
နိဂြောဓသစ္စာ = နောက်ခန္တာတစ်ခု ထပ်မံ အလိုမရှိတော့ခြင်း။
မဂ္ဂသစ္စာ = ဤခန္တာမှ လွတ်ရာနည်းလမ်းကို သိခြင်း။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ပန်းတိုင် ?
- ချမ်းသာခြင်းမရှိ၊ ဆင်းရဲခြင်းမရှိ။ ပကတိ အေးငြိမ်းရာအမှန် နေရာတစ်ခု။
နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ရန် လျှောက်ရမည့်လမ်းကြောင်းရှိပါသလား?
- ရှိပါ၏။ ၎င်းကို မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဟု ခေါ်၏။
the elements of the Eightfold Path မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို ပညာ၊ သီလ၊ သမာဓိဟူ၍
အဆင့် (၃) ဆင့် ခွဲနိုင်၏
Wisdom (panna) ပညာဖြင့်...
- အကောင်းအဆိုးကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်၏ (မှန်စွာ မြင်ခြင်း - သမ္မာ
ဒိဋ္ဌိ)။ Right Understanding (samma ditthi)
- သမ္မာသင်္ကပ္ပ-မှန်စွာကြံခြင်း။ Right Aspiration (samma sankappa)
Morality (sila) သီလဖြင့်
- သမ္မာဝါစာ- မှန်စွာပြောခြင်း။ Right Speech (samma vaca)
- သမ္မာကမ္မန္တ-မှန်စွာပြုခြင်း။ Right Action (samma kammanta)
- သမ္မာအာဇီဝ-မှန်စွာ အသက်မွေးခြင်း။ Right Livelihood (samma ajiva)
Concentration (samadhi) သမာဓိဖြင့်
- သမ္မာဝါယာမ- မှန်စွာအားထုတ်ခြင်း။ Right Effort (samma vayama)
- သမ္မာသတိ- မှန်စွာ အမှတ်ရခြင်း။ Right Mindfulness (samma sati)
- သမ္မာသမာဓိ- မှန်စွာ စူးစိုက်တည်ကြည်ခြင်း။ Right Concentration (samma samadhi)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဘုရားသည် လူသားစင်စစ်ဖြစ်၏။ လူသားချင်းအတူတူ
- သစ္စာလေးပါးတရားကို ဆရာမကူပဲ ကိုယ်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင်၍ ဖြစ်သည်။
(ဧဝံမေသုတံ။ ။ ဆရာတော်ဥူးသုမင်္ဂလ၏ တရားတော်မှနာယူမှတ်သားသည်များ
ထပ်မံ ကိုးကားသော စာစုများ။
Posted by Ko Gyii at 7:09 PM 1 comment :
Labels: ဆရာတော်ဥူးသုမင်္ဂလ , ဗုဒ္ဓဘာသာ , ဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲ , ဘာလို့ ရှိခိုးတာလဲ , ဘာသာရေး , ဘုရား , သိကောင်းစရာ
GMAIL မှာ တစ်ခါ ရိုက်ထားရင် နောင် ထပ်ရိုက် စရာ မလိုပဲ အီးမေးပို့တိုင်း ထဲ့ပို့လို့ ရတဲ့ စာစုလေးတွေ အများကြီး သိမ်းထားချင်တယ် ဆိုရင်…
တစ်ခါ ရိုက်ထားရင် နောင် ထပ်ရိုက်စရာ မလိုပဲ
အီးမေးပို့တိုင်း ထဲ့ပို့လို့ ရတဲ့ စာစုလေးတွေ
အများကြီး သိမ်းထားချင်တယ် ဆိုရင်
GMAIL မှာ ပါတဲ့ Canned responses ဆိုတဲ့ feature လေးတစ်ခုအကြောင်း ပြောကြရအောင်။
မိတ်ဆွေ...သတိပြုမိပါသလား။ ဂျီမေးမှာ သင် အီးမေးပို့ဖို့ စာပြင်ဆင်နေရင် Subject line အောက်မှာ Canned responses ဆိုတဲ့အရာ (ခလုတ်) တစ်ခု ပေါ်နေပါတယ်။ အောက်ကပုံလို အရာလေး တစ်ခုပါ။ မြင်ရပါတယ်နော်။ (မမြင်ရလျင် အဲ့ဒီ feature ကို သင် OFF ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Settings > labs စာမျက်နှာက Canned responses ကို enable လုပ်ကြည့်ပါ။)
Canned responses = သူက ဘာနဲ့ တူလဲဆိုတော့ ဂျီမေးက Signature နဲ့ ဆင်ပါတယ်။ Signature ဆိုတာ တစ်ခါ ရိုက်ထားရင် နောင် ထပ်ရိုက်စရာ မလိုပဲ အီးမေးပို့တိုင်း ထဲ့ပို့လို့ ရတဲ့ စာစုလေးပါ။ Signatureမှာ အကန့်အသတ် နည်းနည်းရှိပါတယ်။ စာအများကြီး မဆန့်ပါဘူး။ ပီးတော့ တစ်မျိုးတည်းပဲ သတ်မှတ်ထားလို့ ရပါတယ်။ ဒီတော့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ တစ်ခါ ရိုက်ထားရင် နောင် ထပ်ရိုက်စရာ မလိုပဲ အီးမေးပို့တိုင်း ထဲ့ပို့လို့ ရတဲ့ စာစုလေးတွေ အများကြီး သိမ်းထားချင်တယ် ဆိုရင် ဒီ Canned responsesကို အားကိုးရပါမယ်။
နမူနာ အနေနဲ့ ကျနော် Canned responsesတစ်ခု ဆောက်ပီး သိမ်းပြပါရစေ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီ သိမ်းထားတဲ့ Canned responsesကို ပြန်သုံးပြပါရစေ။
၀) Canned responsesတစ်ခု အဖြစ်သိမ်းမည့် စာစုလေးတစ်ခု တွေ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ အောက်ပါစာသားလေးပါ။ ထိုစာသားလေးကို select မှတ်ပီး မောက်စ်ထဲ ကော်ပီကူးထားလိုက်ပါ။ Ctrl+C ပေါ့ဗျာ။
၁) Compose Mail ကို နှိပ်၍ အီးမေးအသစ်တစ်စောင် ဖန်တီးပါ။ ခုနက select မှတ်ထားသော စာစုလေးကို paste လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ ပြန် select မှတ်ထားပါ။ ၎င်းစာမျက်နှာပေါ်ရှိ Canned responses ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
၂) အောက်ကပုံမှာ ပြထားသလို Canned Responses စာရင်း ကျလာပါမယ်။ အခု ကျနော် လုပ်မှာက Select မှတ်ထားတဲ့ စာစုကို Canned Responses အဖြစ် သိမ်းမှာလေ။ ဒီတော့ New Canned Responses အသစ်တစ်ခု အဖြစ် သိမ်းဆည်းဖို့ Save အုပ်စုထဲက New Canned Responsesကို ရွေးနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုရွေးနှိပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကျနော် select မှတ်ထားတဲ့ စာစုကို New Canned Responses အသစ်တစ်ခု အဖြစ် သိမ်းဆည်းဖို့ အခွင့်အရေး ရပါပီ။
၃) အောက်ကပုံမှာ ပြထားသလိုပါပဲ။ ဘာနာမည်နဲ့ သိမ်းမလဲ မေးလာပါတယ်။ ကျနော်က "အိုင်စတိုင်း၏ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်အယူအဆ-၁" ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ အိုကေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါဆို ခုနက စာစုကို Canned Responsesအဖြစ် သိမ်းဆည်းလိုက်ပါပီ။ ဖွင့်လက်စ အီးမေးအလွတ်ကို မလိုအပ်လျင် discard လုပ်လိုက်ပါ။ ထိုနည်းအတိုင်း Canned Responsesတော်တော်များများ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ စာရိုက်ရ သက်သာတာပေါ့ဗျာ။
၄) ခုနက သိမ်းထားတဲ့ Canned Responsesကို ပြန်ခေါ်သုံးကြည့်ကြရအောင်။ မေးတစ်ခုခု အသစ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ရီပလိုင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဖော်ဝပ်ဖြစ်ဖြစ် ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပွင့်လာရင် Canned Responses ခလုတ်ကို နှိပ်ကြည့်ပါ။
၅) စာကိုယ်ထဲကို Canned response ထဲ့ဖို့ Insert အုပ်စုအောက်က တစ်ခုခုကို ရွေးပါ။ အောက်ကပုံမှာ ခုနက ကျနော်သိမ်းလိုက်တဲ့ Canned Response "အိုင်စတိုင်း၏ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်အယူအဆ-၁" ရောက်နေတာ မြင်ရပါမယ်။ ကျနော်က ဒါကို ရွေးပီးနှိပ်လိုက်ပါတယ်။
၆) ရွေးလိုက်တဲ့ Canned Response "အိုင်စတိုင်း၏ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်အယူအဆ-၁" ဟာ စာကိုယ်ထဲ အော်တိုငုတ်တုတ် ရောက်သွားတာ မြင်ရပါမယ်။
အောက်ပုံမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ တကယ့်ကို အသုံးကျတဲ့ feature တစ်ခုပါပဲ။ မိတ်ဆွေအတွက်လည်း အသုံးတည့်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
Posted by Ko Gyii at 7:04 PM No comments :
Labels: canned , feature , Gmail , Google , labs , response , အိုင်တီ , အီးမေးလ်
ဂျီမေးမှာ ပုံထည့်တာ ဘယ်လို လုပ်ရလဲဆိုတာ အများစုက သိပြီးသားဆိုတော့ အားနာပါရဲ့...သိပြီးရင် ကျော်သာဖတ်ကြပါဗျာ...
၁) အတက်တွဲတာ AttachaFile နဲ့...
၂) စာကိုယ်ထဲမှာ ပုံထည့်တာ။
သမားရိုးကျ အတက်တွဲတာကတော့ လုပ်နေကျ အတိုင်းပါပဲ။ Subject အောက်က AttachaFile ကို နှိပ်ပီး တွဲမည့် ပုံ၊ ဖိုင်ကို ရွေးပေးလိုက်ယုံပါ။
စာကိုယ်ထဲမှာ ပုံထည့်ဖို့ကတော့ lab တစ်ခုကို enable လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း settings > Labs ကိုဝင်ပြီး Inserting Images ကို Enable လုပ် Save ပေးရပါမယ်။ အောက်ပုံကို ကိုးကားပါ။
ဒါကို Enable လုပ်ပီးရင် ဂျီမေးစာပို့တဲ့ စာမျက်နှာမှာ အောက်ကလို ပုံလေး ပေါ်လာပါပီ။ မောက်စ်နဲ့ ထောက်ပြထားတဲ့ ဓတ်ပုံအိုင်ကွန်နဲ့ ခလုတ်ခလေးကို နှိပ်ပြီး စာကိုယ်ထဲ ထည့်မည့်ပုံရွေးလို့ နေရာချကာ ထည့်နိုင်ပါပြီ။
ကျနော် တစ်ခု ပြောဖို့ မေ့နေတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ drag and drop ဆိုတာ မှတ်မိတယ်ဟုတ်? ကွန်ပျူတာမှာ ဖိုင်တွေ နေရာရွေ့ရင် အလွယ်တကူ မောက်စ်နဲ့ဖိဆွဲပီး လိုရာဖိုဒါထဲ ဆွဲပို့တာကို ပြောတာလေ။ အဲ....ပြောချင်တာက...
ဂျီမေးမှာ ဒါမျိုး လုပ်လို့ ရသဗျ။
၁) အတက်တွဲချင်ရင်... တွဲမဲ့ဖိုင်ကို မောက်စ်နဲ့သာ ဖိဆွဲပီး ပို့မည့်စာပေါ်တင်လိုက်ပါ။ အောက်ကလိုပေါ့။ Drop Files here ဆိုတဲ့ အကွက် အော်တိုပေါ်လာပါမယ်။ အဲ့ဒီအကွက်ထဲ ရောက်အောင် ပို့လိုက်ရင် ရပီ။
၂) ပုံကို စာကိုယ်ထဲ ထဲ့ချင်ရင်...ထဲ့မည့်ပုံကို ရွေး၍ မောက်စ်နှင့်ဖိဆွဲပီး ပို့မည့်စာကိုယ်ပေါ် တင်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ဝင်သွားပါပီ။ အောက်က ပုံကို ရှုပါ။ (*မှတ်ချက် စာကိုယ်ထဲ ထည့်ရန် ဤနည်းလမ်းမှာ Google Chrome browser နှင့်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ Firefox နှင့် မရပါ။)
ဘာမှ မခက်ပါဘူးတာလေကို... ရှင်းပြမိတာ အားနာပါရဲ့... :P
Posted by Ko Gyii at 7:02 PM No comments :
Labels: feature , gif , Gmail , Google , image , insert , jpeg , labs , photo , png , အိုင်တီ , အီးမေးလ်
Gmail ကနေ ကိုယ့်ဆီ စာရေးလာသူ ဘယ်ကလဲ ဆိုတာ ကြ ည့်နည်း (Very Easy)
ကိုယ့်ဆီ စာရေးလာတဲ့ ဂျီမေးပိုင်ရှင် ဘယ်ကလဲ။ ဘယ်ကနေ စာရေးလိုက်တာလဲ မေးစရာ မလို။ အလိုလို သိနိုင်တဲ့ နည်းပါ။
*မသိသေးသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ သိပီးသူများ ကျော်ဖတ်ပါ ခင်ဗျ။ (မှတ်ချက်။ ဒါ ကျနော် "ရှင် ဘယ်ကလဲ မေးစရာမလိုအောင်.." ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ http://groups.google.com/group/real-family-mm/ မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေးဖြစ်ပါတယ်။)
သူ့ဆီက ဝင်လာတဲ့ အီးမေးနဲ့အတူ သူဘယ်က စာရေးလိုက်သလဲ သိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲဆိုတော့ ...
ဒီလိုလေးပါ။ သူ့ဆီက စာကို ဖွင့်ဖတ်ပါ။
အောက်ကပုံမှာ ပြထားသလို စာခေါင်းစဉ်က show Details ကို နှိပ်ပါ။
အောက်ကအတိုင်း ပေါ်လာပါမယ်။ GMT+၆နာရီခွဲတဲ့။ ဒါဆို ရန်ကုန်ကပါပဲ။ ငှဲ ငှဲ။ တွေ့လား ဘာမှ မခက်ဘူးနော်...
GMT နဲ့ နိုင်ငံ အသီးသီးရဲ့ ဆက်စပ်ချက် သိပီးသားလို့ ထင်ပါရဲ့...
show details နှိပ်လို့ ပေါ်လာတဲ့ details အထဲမှာ ဒါမပါလာဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီ feature ကို GMAIL labs မှာ Enable လုပ်ထားရပါမယ်။ ဂျီးမေးဝင်းဒိုးစ်ကို ဖွင့်ပါ။ Settings ကို ဆက်ဝင်ပါ။ Labs ကို ဆက်ဝင်ပါ။ ရောက်ရင် Sender Time Zone ကို ရှာပီး Enable လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပီးတော့ Save ပါ။ ဒါဆို အိုကေသွားပါလိမ့်မယ်....
Posted by Ko Gyii at 6:56 PM No comments :
Labels: feature , Gmail , Google , labs , sender , show , time , zone , အိုင်တီ , အီးမေးလ် , အထွေထွေ ဗဟုသုတ